အဖြူရောင်အိမ်လေးတစ်လုံး: ရိုးသားစွာ ရင်ခုန်ကြပါစို.
... 2:56:00 PM
“အလည်တစ်ခေါက် မရောက် လာခဲ့တဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း နာမည် ကြီး Blogger တစ်ယောက်ကို တော့ နေ. စဉ်မျှော်ရင်းခင်မင်ခြင်းများစွာ နဲ. မုန်းတီးချင်လာမိပါတယ်”
ဘာပဲပြောပြော ရိုးသားမှုတွေ မြင်နေရတဲ့ ဒီဘလော့မှာ အမြဲတမ်းစာလာဖတ်ပါတယ်။
Congratulations ပါ ..
ကျွန်တော်က လူတစ်မျိုး ..
အသစ်အသစ်တွေကို အားပေးတယ် ကူညီတယ်။
စီနီယာ့ စီနီယာတွေရဲ့ အားပေးဖော်ကိုတော့ ကျွန်တော်လဲ မမျှော်လင့်ရက်ပါဘူး ..
ကျွန်တော်က အပျော်တမ်းမို့လို့ပါ ..
11 April 2009 at 7:34 PM
စရေးကတည်းကခံစားရမဲ့သူတွေ ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ သိပါတယ။် ဘာဘဲပြောပြော ရေးချင်တာ ရှိရင်ရေးချင်တဲ့ ခံစားချက်အတိုင်းရေးပါတယ။် လူတိုင်းဟာ သူ့ခံစားချက်နဲ့ သူရှိပြီး လွတ်လပ်စွာ ခံစားခွင့်ရှိပါတယ။် ဘလော့ရေးဘို့အတွက် အစကတည်း က ဝင်ခွင့် တောင်းမထားပါဘူး ရေးနိုင်ပါတယ။် ကိုယ်လဲ ရေးတယ။် ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ ရေးမှာပါဘဲ။ လာဖတ်ရင်တော့လည်းဝမ်းသာပါတယ။် ဆူဆဲသွားလည်းခံရမှာဘဲ ကိုယ်က ရေးမိပြီကိုး။
အင်တာနက်ရှိပြီး မြန်မာဖောင့်ရရင် ဘလော့ရေးလို့ရပြီဆိုတာ ညီလင်းဆက်ပြောတယ်လို့ကြားဘူးပါတယ။် မြန်မာဖောင့်မရိုက်တတ်ဘဲနဲ့ ဘလော့ရေးနေတယ်ဆိုတာကတော့ ကိုရင်ညိမ်းက တို့ကို ပြောတယ်လို့ထင်ပါတယ။် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေ ကချ ပြလို့ရတဲ့နေရာမို့လို့ အန်မတန် စွဲလမ်းမိပါတယ။်
ပြောချင်တာ ကတော့ ကိုယ်ဟာ ဘလော့အားလုံးလိုလိုကို နိုင်သလောက်ဖတ်ပါတယ။် ထွက်သမျကို တို့ဘလော့မှာ link လုပ်ပြီးတော့ကိုဖတ်တာပါ။ ကွန်မက်လဲ နိုင်သလောက်ရေးပါတယ။် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကို က စာကလေးရေးပြီးးရင်ဘယ်သူများဘာလေးများလာရေးသွားမလဲလို့မျော်နေတဲ့သူမို့လို့ ကိုယ့်လိုဘဲများလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အနည်းဆုံးလာဖတ်သွားပါတယ်လို့ရေးပါတယ။် ကိုယ့်အတွက်ကတော့လာဖတ်သွားရင်ကိုဝမ်းသာမဆုံးပါဘူး
အဲသလိုနဲ့ ဖတ်လာလိုက်တာ အခုအတော်ကြာပါပြီ။ တစ်နေ့တစ်ခြားလည်း လင့်တွေ တိုးလာလိုက်တာ မနည်းပါဘူး။ ကိုယ်က ကျောင်းစာ အိမ်စာ လုပ်သလိုကို ပြီးအောင်ဖတ်တတာပါ။ ထွက်သမျကို ဖတ်တာပါ။ သေချာလည်းဖတ်ပါတယ။်
ကွန်မက်လည်းနိုင်သလောက်ရေးပါတယ။် အဲသလိုနဲ့ကြာလာတော့ exhausted ဖြစ်လာပါတယ။် တစ်နေ့တစ်နေ့ပေးလိုက်ရတဲ့ အချိန်မနည်းပါဘူး။ ချက်တင်လည်း လုပ်သေးတယ။် ဘလော့ရေးဘို့လည်းတွေးပါသေးတယ။် သိမှာပါ အချိန်ဘယ်လောက်ကုန်သလဲ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘယ်လောက်ကင်းကွာသလဲဆိုတာကို။ တို့ရဲ့ဘလော့လင့်ကို လာကြည့်ပါ။ အများကြီးပါ အဲဒါကို နေ့တိုင်းဖတ်တယ်။ တကယ်ဖတ်ပါတယ။် ကြာလာတော့ အိုအေစစ်ကလေးတွေများလာလို့မွန်းလာတယ်ဆိုတာ တစ်ကယ်ပါ ညာမပြောဘူး စိတ်ထပ်ဆိုးလည် မတတ်နိုင်ဘူး ခံစားရတာကိုပြောတာဘဲ ကိုယ်ဒိလေို ပြောလို့လည်းရေးနေကျလူ က မရပ်ပါဘူး ဆက်ရေးမှာမှာပါဘဲ.။ သပ်သပ်စီပါ။ ဆက်ဖတ်နေဦးမှာပါဘဲ။ ကိုယ့်ကိုယကို မဖတ်ပါနဲ့လို့တားဆီးလို့ ပြောလို့မရသလို။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဘာကောင်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ရေးချင်လို့ ရေးနေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါဘဲ။ လာဖတ်သူတွေကို အားနာလိုက်တာ လာဖတ်ရတာ လုိ့ပြောပြီး ဆက်ရေးနေဥိးမဲ့သူတစ်ယောက်ပါဘဲ။
အသစ်တွေကို နိမ်လိုတဲ့ဆနမရှိပါ။ အသစ်ဆိုတာ ကြာတော့လည်း အဟောင်းဖြစ်သွားတာပါဘဲ။ အဲဒီထဲက ဆက်လက်ရေးနေတဲ့သူတွေ ရှိသလို ရပ်တဲ့သူတွေလည်း အမျိူးမျိူးရှီပါတယ။်။ ဆန္ဒရှိသလို ရေးနိုင်ပါတယ။်
12 April 2009 at 9:54 AM
ကျနော့ဘလော့လေးတုန်းက အဖြစ်ကလေးတွေကို ပြန်မှတ်မိစေတယ်ဗျာ။
စရေးခါစ သုံးလေးလ ကော့မန့်ဆိုတာကိုဘာမှန်းလည်းမသိခဲ့ဘူးလေ။ ရေတွက်ရကောင်းတယ်လို့လည်းမထင်ခဲ့ဘူး။ ဘယ်သူတွေလာလို့ ဘယ်သူတွေ စာရေးနေမှန်းလည်း မသိခဲ့ဘူးလေ။ နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှ သိလာရတယ်။ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ ဆရာမ မေငြိမ်းဘလော့တဲ့၊ ၀တ္တုတွေအများကြီးတင်တတ်တဲ့ မာယာဘလော့၊ လေးစားရတဲ့ ဆရာဦးတင်မိုး သမီး မမိုးချိုသင်းဘလော့တ၊ဲ့ အိုး သူ့ထက်သူ ဘလော့ဂါတွေထဲမှာ စာကောင်းပေကောင်းတွေ ရေးနေတဲ့ အမကေ၊ မတန်ခူး၊ ကဗျာတွေရေးတဲ့ ကို ငြိမ်းဇေဦး၊ ကိုအောင်သာငယ် စသည် စသည်ပေါ့ဗျာ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လည်ကြတယ်။ ဆရာမမေငြိမ်းဆီက စာလာဖတ်တယ်ဆိုပြီး ဆီဗောက်မှာလာပြောတော့ မယုံမရဲနဲ့ ဆရာမ ဟုတ်ပါသလားလို့ ၀မ်းသာအားရ ပြန်မေးခဲ့ဖူးတယ်။ မမိုးချိုသင်းက ကော့မန့်ပေးတော့လည်း ပျော်လိုက်ရတာ။ အမကေကို စောင်းကားလေး ကြည့်မိတယ်ပြောတော့ သူပြန်လိုက်လာတယ်။ နောက်တော့ လူချင်းမသိပေမယ့် ရင်ဘတ်ချင်းရင်းနှီးတဲ့သူတွေက ပိုပိုလာတာပေါ့ဗျာ။ ကျနော့စာတွေကို အမြဲမပြတ်ဖတ်ပေးတတ်တဲ့ မခင်ဦးမေတို့ ညီငယ်မောင်မျိုးတို့ကလည်း ရင်းနှီးမှုတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်နဲ့ပေါ့။ တစ်ချက်တစ်ချက်လာဖတ်တတ်တဲ့သူတွေကြတော့လည်း အလုပ်အားချိန်လေး လာဖတ်ရှာတယ်ပေါ့ဗျာ လေးစားခင်မင်ရတာပါပဲ။ ကိုမင်းအိမ်ဖြူရဲ့ ခံစားချက်ကိုလည်း ထပ်တူနားလည်ပေးမိပါတယ်။
နှစ်သစ်နဲ့အတူ ကိုမင်းအိမ်ဖြူမျှော်လင့်နေတဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း နာမည်ကြီးဘလော်ဂါကြီးလည်း အလည်တစ်ခေါက်မက ရောက်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပေးပါတယ်။
12 April 2009 at 11:44 PM
ဟဟ.. မမက ဒီလောက်အရှည်ကြီး လာရေးသွားတယ်ဆို ဂုဏ်ယူသင့်တာ၊
ကိုမင်းအိမ်ရေးတဲ့စာတွေ ကောင်းပါတယ်၊ ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှလဲ ရွံ့နေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး၊ ကျမကတော့ ဝါသနာပါလို့ စာဖတ်တာ၊ comment အမြဲ မပေးဖြစ်ရင်တောင် ဖတ်ဖြစ်နေမှာပါ
20 June 2009 at 7:36 AM
ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ကော့မန်.တွေကို မပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူး၊၊
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို.ပဲ ဆိုလိုက်ပါရစေ ၊၊ ရေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ တထိုင်တည်း ခံစားရသမျှ ရေးလိုက်တာပါပဲ ဗျာ ၊၊ နားလည်ပေးကြပါလို....
20 June 2009 at 10:00 AM